चितवनमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको मैदान सम्याउने काम सुरु | MeroKhabarSathi
चितवनमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट…
चितवनको रामपुर शान्तिचोकमा बन्न लागेको गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको मैदान सम्याउने काम बुधबारबाट सुरु भएको छ । दुई वटा डोजरको सहायताले मैदान सम्याउने काम धमाधम सुरु गरिएको हो ।
हिजो (विहीबार) नापी कार्यालय चितवनका इन्जिनियर आएर रंगशालाको मूल मैदानको क्षेत्रको नापजाँच गर्ने र पिच बन्ने स्थानको टुंगो लगाइने फाउण्डेशनका तर्फबाट साइट हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
मैदानमा पिच निर्माणको प्रारम्भिक काम गर्न नेपालकै चर्चित क्यूरेटर मानिएका कोमल पाण्डे चितवन आएका छन् । उनले केही दिन सम्म चितवनमा नै बसेर रंगशालामा बन्ने क्रिकेट पिचका प्रारम्भिक काम अघि बढाउने बताएका छन् । क्यूरेटर पाण्डेले बर्खा लाग्नुअघि नै पिचको आधारभूत संरचना बनाउने बताए । क्यूरेटर पाण्डेले भने, “बर्खा अगाडि हामी लेभलिङको काम सकेर पिच खन्छौं ।”
मैदानमा पाँच वटा पिच निर्माण गर्ने योजना छ । मूल पिचको दायाँबायाँ थप दुई दुईवटा पिच निर्माण गरिने छ । पिचको स्टाण्र्डड साइज १० फिट चौडाई र ६६ फिट लम्वाईलाई मानिन्छ । क्रिकेट मैदानको बीचमा रहने पिचबाट ९० मिटर सबैतिरको भूभाग मूल मैदानमा समेटिने छ ।
क्युरेटर पाण्डेले क्रिकेट रंगशालामा बन्ने स्थानको माटो पानी सोस्ने ज्यादै राम्रो भएको बताए । उनले पिचका लागि भने तनहुँबाट माटो ल्याउनुपर्ने बताए । रंगशालाको वरपर चारैतिर ड्रेन तयार गरिने छ । रंगशालाको अन्य संरचनाको डिपिआर करीव बनिसकेको छ भने, मूल रंगशालाको डिपिआर बन्ने अन्तिम चरणमा रहेको धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले जानकारी दिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि अघि बढाइएको छ ।
रगंशाला बन्ने क्षेत्रलाई जस्ताले बार्ने काम, निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने कार्यालय निर्माण, कर्मचारी आवासगृह, गोदाम घर, सुरक्षाकर्मी घरलगायतका आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । हालसम्म करीब रु. ८० लाखको खर्च भएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रियस्तरको र पूर्व अभ्यासका लागि एउटा/एउटा खेल मैदान निर्माण गर्ने योजनामा समेटिएको छ । रंगशाला निर्माणमा नेपालीसहित विदेशी विज्ञहरुलाई पनि ल्याएर काम गराउने योजनामा फाउण्डेशन रहेको अध्यक्ष कट्टेलले बताए । जेठ महिनासम्ममा ५० करोड संकलन गरी आवश्यक निर्माण सामग्री जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
हालसम्म रु. ६ करोड संकलन भएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । कट्टेलले आर्थिक सहयोगका लागि देशभर अभियान शुरु गरिने बताए । निर्माणको ठोस काम सुरू भै नसकेकोले सहयोगको अपिल पनि उतिसारो नगरिएको अध्यक्ष कट्टेलले बताए ।
सबै जिल्लामा सहयोग समिति निर्माण गरी आर्थिक सहयोग अभियानलाई तीव्रता दिने योजनामा फाउण्डेशन रहेको छ । अर्थ संकलनका लागि बैशाख १३ गते फाउण्डेशनको टोली दुबई जाँदै छ । जापान, अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिका जाने कार्यक्रम पनि तय भएका छन् । आगामी भदौंमा निर्माणको शिलान्यास गर्ने योजना रहेको फाउण्डेशनका अध्यक्ष कट्टेलले जानकारी दिए ।